Fahamka Shabakadda Hillaaca iyadoo la adeegsanayo Abacus | Exonumia
# Fahamka Shabakadda Hillaaca iyadoo la adeegsanayo Abacus
Waxaa qoray Roy Sheinfeld 2018/03/25open in new window
Waxaan helay jawaab celin badan oo wanaagsan ka dib maqaalkeygii hore, Shabakadda Iftiinku waa mustaqbalka Bitcoinopen in new window. Si kastaba ha noqotee, markii aan akhriyay qaar ka mid ah jawaab-celinta, waxaa ii cadaatay in dadka qaar aysan si buuxda u fahmin sida Shabakadda Hillaaca (LN) dhab ahaantii u shaqeyso. Maqaalkan, waxaan isku dayi doonaa inaan kala saaro fikradda ka dambeysa LN iyo kanaalada lacag bixinta iyadoo la adeegsanayo isbarbardhigga abacus, aniga oo aan gelin farsamooyinka gaarka ah ee hirgelinta LN.
Hadda, ka fikir kanaalka lacag bixinta LNopen in new window sida hal silig oo abacus ah, halkaas oo tusbaxyadu ay matalaan bitcoin-yada gudaha kanaalka. Marka Alice iyo Bob ay abuuraan kanaalka lacag bixinta dhexdooda, Alice waxay dhigataa bitcoins ka Blockchain ee kanaalka dhexdiisa. Hadda, bitcoins (tusaale 10 bits ama 0.00001 BTC) waxaa iska leh Alice. Tusaalahan, kuul kastaa wuxuu la mid yahay hal xoogaa:
Siliga abacus iyo kanaalka lacag bixinta ayaa leh astaamo wadaaga:
Labada jiho: sida tusbaxa siliga abacus waxaa laga dhaqaajin karaa bidix ilaa midig iyo ku xigeenka, bitcoins waxaa laga rari karaa Alice loona wareejin karaa Bob iyo ku xigeenka.
Lahaanshaha: gudaha abacus, tusbaxyadu waxay noqon karaan bidix ama midig, waligoodna silig badhtankooda. Si la mid ah, bitcoins ee kanaalka lacag-bixinta waxaa iska leh Alice ama Bob.
go'an:* oo la mid ah habka aan tusbaxa loogu dari karin ama looga saari karin silig, Alice iyo Bob waxay ku beddelan karaan bitcoins dhexdooda, ilaa lambarka loo dejiyay markii la furayo kanaalka lacag bixinta. Haddii ay rabaan inay beddelaan tiro badan oo bitcoins ah, waxay ku qasbanaan doonaan inay sameeyaan macaamil ganacsi oo kale.
Tani waa sida kanaalka lacag-bixinta u eg yahay ka dib markii Alice ay u soo dirtay 2 bits Bob:
Alice hadda waxay leedahay 8 kuul, Bobna wuxuu leeyahay 2 kuul. Hadda, aan sheegno in Bob uu sidoo kale ku xiran yahay LN iyo Carol isticmaalaya kanaalka lacag-bixinta 10-bit:
LN, Alice waxay Carol ku siin kartaa Bob. Isbarbardhigga abacus, haddii Alice ay rabto inay 2 xabbo u dirto Carol, waxay 2 kuul siligga Alice-Bob u dhaqaaqdaa dhanka midig (Bob), Bob-na wuxuu u guuraa 2 kuul oo siligga Bob-Carol ku yaal dhanka midig (Carol). Tani waa sida ay u egtahay ka dib markay Alice soo dirtay Carol 2 bits:
Waxaa muhiim ah in la sheego in haddii Bob uu ogolaado inuu ka qaybqaato macaamilkan, ma aqbali karo suunka Alice iyada oo aan loo wareejin tiro isku mid ah oo kuul ah Carol.
Isticmaalka isbarbardhigga abacus, way fududahay in la sharaxo dabeecadda wax kala iibsiga LN-ka guud ahaan, iyo gaar ahaan waa maxay shuruudaha kanaalka lacag bixinta u baahan yahay inuu buuxiyo si loo habeeyo wax kala iibsiga. Tusaale ahaan, way fududahay in la arko sida Alice aanay Carol u soo diri karin kuul ka badan inta uu Bob xamili karo. Mar labaad, waxaa laga yaabaa in mustaqbalka ay awoodi doonto inay ku sameyso AMPsopen in new window, laakiin taasi waa sheeko maqaal kale.
Haddii aad maqaalkan u aragtay mid waxtar leh, fadlan ha ilaawin inaad ku darto sacab (riix dheer si aad ugu darto sacab badan) oo la wadaag.